10 Arrimood Oo Looga Digay Wiil Ama Gabadh Kasta Oo Gaadha 25 Jir Iy
Home Entertainment & Lifestyle 10 Arrimood Oo Looga Digay Wiil Ama Gabadh Kasta Oo Gaadha 25...
Qof waliba noloshiisa waxa uu meel sare gaadhaa ama hoos u dhacaa haddii cimro ku simo hadba inta uu wakhtigiisa dhallinyaranimo wax qabsado ee meel sare hiigsado ama ku dadaalo in uu nolosha meel wanaagsan ka galo. Da’da aad qayrkaa ka hadhaa ama aad dhaaftaa waa da’da dhallinyaranimo gaar ahaan wixii ka bilaabma 20-jir waxaanan qormadan kooban ku eegi doonaa 10 qodob oo dhallinyarada looga digay oo saamayn taban ku yeelan karta noloshooda.
1 – CABISTA SIGAARKA – Markasta dhakhaatiirtu waxay miiska soosaaraan caddeymo la xidhiidha in cabbista sigaarka noocyadiisa kala duwan ay halis ku tahay caafimaadka shaqsiga. Fadlan iska dhaaf iskana iloow haddiiba aad gaadhay 25 jir si aanay noloshaadu baabi’in.
2 – IN AANAD AQOON WAXA AAD KA DOONEYSO NOLOSHAADA – Marka aad tahay shan sanno jir, noloshaada wax qorshe ah uma dejin kartid. Wax badan ayaad ku riyaaqeysaa inaad ku ciyaarto xaafadda. Laakiin 20 sanno ka dib, waa inaad qorshe dhab ah u dejisaa noloshaada. Weliba qorshee qaabka aad dooneyso inaad u maareyso inta ka dhimman noloshaada.
3 – INAAD NOQOTO QOF GO’AAN XUN – Go’aan qaadashadu waa waxyaabaha uu aadamuhu ku kala horreeyo, weliba marka la gaadhayo go’aan isbeddel dhab ah ku sameyn kara noloshaada. Laakiin xilliga ugu fiican inaad go’aankaas qaadato waa wixii ka dambeeya 25 sanno jirnimadaada.
4 – INAAD DAGAAL KU GASHO SOCIAL MEDIA-ha – Tani nacasnimo ayey kuu tahay, inaad dagaalka dhabta ah ee nolosha halka lagu galo aad u aragto baraha bulshada ee adduunka saameynta ku leh sida Facebook. Inaad ku dagaallanto aragti baraha bulshada ah waa wax laga fiican yahay. Iska iloow oo qabso dantaada.
5 – HA GALIN DEGAAL BADAN – Lama doonayo inaad noqoto qof gacanta ka hadla marba haddii aad 25 sanno dhaaftay. Waxaa lagaa doonayaa inaad noqoto shaqsi ka dagaalama maskaxda. Marka aad gaadho 25 sanno, ahow nin rag ah ama shaqsi dumar ah, waxaad ku qasban tahay inaad ka tanaasusho ama iska dhaafto boqolkiiba 30 caadooyinkaagii dhallinyaronimada.
6 – HA CUNIN CUNNOOYINKA DUFANKA IYO DUXDA BADAN IYO KUWA WADDOOYINKA LAGU SHIILO – Cuntooyinka wakhtigan dhallinyaradu ku waalan yihiin waxa ay qofka ku keenaan xanuuno adag oo noloshooda cawaaqib xumo ku keeni kara. Cuntooyinka shiilan, kuwa dufanku ku badan yahay iyo kuwa qashinka ah ee warshaduhu sameeyaan sida Chips-ta ha u dhawaan culimada caafimaadku waa ay ka digaan.
7- DAAWASHADA TALEFASHINKA WAQTIGA OO DHAN – Xitaa haddii aanad shaqo hayn kuuma wanaagsana inaad saacado badan ku kharash gareyso shaashadda telefishanka, beddelkeeda waxaa kuu wanaagsan socodka badan iyo in aad wakhtiga habeenkii wax akhrisato ama internetka wax ka daalacato faa’iido kuu leh.
8– INAAD WAQTI BADAN KU BIXISO ISKU MADADAALINTA TALEEFOONKAAGA GACANTA – Dhakhaatiirta iyo hay’ado badan oo baadhitaan sameeyey ayaa ka digay inuu isticmaalka waallida ah ee taleefoonka gacantu hoos u dhigo tayada aadanaha dhinacyada maskaxda iyo wax qabsigaba.
9 – KHARASH GAREYNTA LACAG AANAD HEYSAN – Waxaa wanaagsan inaad durba hore ka barato qaabka loo maareeyo lacagta marka aad 25 sanno jirsato. Haddii aad bilowdo inaad ku ciyaarto hantidaada ama ta waalidkaa haba yaraatee, markaas waxaad halis ugu jirtaa in aanad weligaa noqon nin wax u dhigmaan oo lacag leh ama taajir ah.
10 – INAAD ISTICMAASHO MAANDOORIYE– Tusaale ahaan isticmaalka qaadka, shiishadda, khamriga iyo xashiishadda iyo waliba kiniinada lagu sakhraamo marka aad gaadho 25 sanno jir waxay durba halis gaadhsiinayaan wadnahaaga iyo guud ahaan caafimaadkaaga. Sidoo kale dhiigkar ayaa kugu dhacaya xilli hore, guud ahaan caafimaadka uma fiicna maandooriye kastaa sidoo kalena wax soo saar yeelan maydis. Maandooriyuhu waliba qaadku dhallinyaradeena wuu baabi’iyey.